China Tourism Nhepfenyuro 2.36 Bhiriyoni Dzedzimba Dzenhambwe muChikamu Chekutanga cha2021
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » China Kuputsa Nhau » China Tourism Nhepfenyuro 2.36 Bhiriyoni Dzedzimba Dzenhambwe muChikamu Chekutanga cha2021
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Rail Kufamba • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
China indasitiri yekushanya yakagamuchira kupora nekukurumidza muhafu yekutanga ya2021.
Yemukati yekushanya kwemari yemari yakamira pa 1.95 trillion yuan - kumusoro ne208% gore pagore.
83.6% yevagari vakabvunzurudzwa vari kuda kufamba mukota yechitatu, ingangoenzana nedanho pamberi pe COVID-19.
78% yekambani inoongorora vanamuzvinabhizimusi vane chivimbo mumusika wekushanya muhafu yepiri ya2021.
Sekureva kweshumo rakaburitswa ne China Tourism Chikoro (CTA), Vafambi vechiChinese vakaita 2.36 bhiriyoni nzendo dzekumba muhafu yekutanga ya2021 - 153% kuwedzera kubva panguva imwecheteyo gore rapfuura.
ChinaMari yekushanya yekumba yakamira pa 1.95 trillion yuan (anenge $ 301 bhiriyoni) muH1 2021 - kumusoro ne208% gore pagore.
Chinaindasitiri yezvekushanya yakagamuchira kupora nekukurumidza muhafu yekutanga ya2021. Nzendo dzemumba uye mari yezvekushanya yakanga yawana kusvika pa77% uye 70% t, zvichiteerana, padanho rehafu yekutanga ye2019.
Vese vashanyi nevashanyi vanoratidza chivimbo chakasimba. Sekureva kweCTA, 83.6% yevagari vakabvunzurudzwa vari kuda kufamba mukota yechitatu, vangangoenzana nedanho pamberi pe COVID-19, uye 78% yevanoongorora makambani vanofamba vane chivimbo mumusika wekushanya muhafu yepiri ya2021.
Chirevo chinotarisira kuti China igamuchire dzinosvika mabhiriyoni 2.6 enzira dzekumba uye 2.24 trillion yuan mumari yekushanyirwa muhafu yepiri ya2021, kana 88% uye 76%, zvichiteerana, zveyakaenzana nguva imwechete ye2019.
Nyowani illy art muunganidzwa yakasainwa naMona Hatoum yakatanga ...
Ndiani Munhu Ane Simba Akanyanya Mukusimudzira...